Power Station-Power Station-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan waalka waa sumadeena)
Soo-saarista Awoodda ee adeegsata ballaadhinta kuleylka ee kuleylka kuleylka ayaa weli ah tan ugu baahsan iyo habka dhaqameed ee lagu soo saaro baahida ugu weyn ee awoodda howlaha warshadaha iyo codsiyada shacabka.
Awoodda kuleylka caadiga ah ee ka timaadda shidaalka foosha ayaa qiyaastii ah 80% wadarta soo-saarka korantada waxayna sii ahaan doontaa mid sarreysa tobanka sano ee soo socda.
Wada-noolaanshaha, adeegsiga biomasses ama qashinka kale sababo la xiriira howlaha aadanaha ayaa weli sii kordhaya is barbar socda, furitaanka dalabyo cusub oo loogu talagalay baallayaasha awood u leh inay u dhowaadaan adeegyada HT, qulqulka dhoobada iyo qalabka badan, oo ay ku jiraan codsiyada kululaynta degmada.
Kheyraadka dib loo cusbooneysiin karo ee horey u isticmaalay kuleylka kuleylka sida beeraha qoraxda, geothermal waxay ubaahan karaan fureyaal khaas ah oo lagu daro noocyada wax soo saarka Titan.
Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, dhirta caadiga ah waxay u baahan tahay inay hagaajiso waxtarka ayna yareyso qiiqa qulqulka qulqulka sii kordhaya ee heerkulka hawlgalka iyo cadaadiska.
Sidaa darteed, filtarka, marawaxadaha, iyo cadaadiska kale ee ka kooban qaybaha waxay u baahan yihiin inay horumariyaan iyadoo la adeegsanayo qalabka iyo qaababka wax soo saarka ee hagaajinaya iska caabinta ifafaalaha gurguurta, hagaajinta xoogga adkeysiga iyo dammaanad qaadka howlaha la isku halleyn karo ee nolosha laga filayo xaaladaha cusub ee hawlgalka adag.
Titan Valve, iyada oo ay ugu wacan tahay naqshadeynta horumarsan & habka wax soo saarka, waxay bixin kartaa dalabyo balaaran oo baaluq ah oo loogu talagalay dhalinta korantada (wareegyada kuleylka caadiga ah & kuwa hagaagsan, oo ay ku jiraan ilaha la cusbooneysiin karo & codsiyada la xiriira). Titan Valve waxay leedahay shahaadooyin xirfadeed oo dhameystiran oo ay ka mid yihiin ka hortagga dabka, daadinta hooseysa, SIL, iwm. Khibradda Titan iyo waxqabadkeeda warshadaha korontada waxay la kulmi kartaa macaamiisha badan shuruudaha.